१ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको कुमारी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ करोडभन्दा बढी
वैशाख ३०, काठमाडौं । कुमारी बैंकले मंगलवार रू. १ अर्ब १ करोड २७ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको खुद नाफा रू. १ अर्ब ३२ लाखभन्दा बढी थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको नाफामा शून्य दशमलव ९४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको हो ।यो अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा भने रू. ४ करोड ५० लाख ६१ हजार मात्र रहेको छ ।
यो नाफाबाट कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन सक्नेछ । यस वर्ष सञ्चालन नाफा ४ दशमलव २१ प्रतिशत बढी छ । गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाखभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको उक्त कम्पनीले रू. १ अर्ब ४८ करोड ८९ लाखभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको छ ।
खुद व्याज आम्दानी गत वर्षभन्दा २३ दशमलव २६ प्रतिशत बढी छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. २ अर्ब २३ करोड ३० लाखभन्दा बढी खुद व्याज आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष सोहि अवधिसम्म रू. २ अर्ब ७५ करोड २६ लाख भन्दा बढी खुद व्याज आम्दानी गरेको छ ।
१० प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी बढाएर रू. ९ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख ३० हजार पुर्‍याएको उक्त कम्पनीको जगेडाकोष रकम रू. ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रहेको छ ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. २ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी रकम रहेको थियो । यो वर्ष कम्पनीले साढे ४५ प्रतिशतले जगेडाकोष रकम बढाएको हो ।यस वर्ष उक्त कम्पनीले रू. ८५ अर्ब ५० करोड ६७ लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. ८९ अर्ब ७० करोड ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कम्पनीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष १६ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी निक्षेप संकलन र २२ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दनी रू. १४ दशमलव १३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३२ दशमलव ६५ छ ।
सिभिल लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर आइतवारदेखि विक्री खुला [२०७७ सावन, २५]
महुली लघुवित्तको विशेष साधारण सभा भदौ ९ मा[२०७७ सावन, २५]
एनआईबिएल सहभागिता फण्डले ८.२५ % प्रतिफल दिदैं[२०७७ सावन, २५]
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डका दुवै योजनाको प्रतिफलका लागि साउन ३२ गते बुक क्लोज [२०७७ सावन, २५]
चितवनमा प्रहरीसहित ८ जनामा कोरोना पुष्टि[२०७७ सावन, २५]
सिभिल लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर आइतवारदेखि विक्री खुला
महुली लघुवित्तको विशेष साधारण सभा भदौ ९ मा